४ क्यामरा, उत्कृष्ट डिजाइनसहित लञ्च भयो टिकटक कम्पनीको पहिलो स्मार्टफोन, कति छ मूल्य ? | Ratopati
४ क्यामरा, उत्कृष्ट डिजाइनसहित लञ्च भयो टिकटक कम्पनीको पहिलो स्मार्टफोन, कति छ मूल्य ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १७, २०७६ chat_bubble_outline0
टिकटकको पेरेन्ट कम्पनी बाइटडान्स (Bytedance) ले स्मार्टफोन बजारमा आफ्नो फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनसहित कदम राखेको छ । कम्पनीले चीनमा आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन स्मार्टिसन जिआंगुओ प्रो ३ (Smartisan Jianguo Pro 3) सार्वजनिक गरेको छ । फोनका प्रोसेसर र क्यामरा दुबै उत्कृष्ट छन् । चीनमा यसको सुरुवाती मूल्य २,८९९ युआन अर्थात् ४९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । यसबाहेक ८ जीबी + २५६ जीबी भेरियन्टको मूल्य ३,१९९ युआन अर्थात् ५१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने १२ जीबी + २५६ जीबी भेरियन्टको मूल्य ३,५९९ युआन अर्थात् ५७ हजार रुपैयाँ पर्छ ।
यो फ्ल्यागशिप फोनका अन्य विशेषता यस्ता छन्ः
फोनमा ६.३९ इन्चको फूल एचडी + AMOLED डिस्प्ले दिइएको छ जुन 1080x2340 पिक्सल रिजोलुशनसहित आउँछ । यो फोन स्न्यापड्र्यागन ८५५ + प्रोसेसरबाट सुसज्जित छ । यद्यपि, यो एन्ड्रोइडको कुन भर्सनमा बेस्ड छ, त्यसबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
फोनको १२ जीबीसम्मको र्‍याम र २५६ जीबीको स्टोरेज अप्सन पेश गरिएको छ । फोनको २५६ जीबी इन्टरनल स्टोरेज भएको भेरियन्ट फास्ट डेटा ट्रान्सफरका लागि UFS 3.0 सपोर्टसहित आउँछ । फोन स्मार्टिसन अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्छ ।
चारवटा क्यामरासहित लञ्च भयो फोनः
फोनमा क्वाड (चार) रियर क्यामरा सेट दिइएको छ । यसमा ४८ मेगापिक्सलको वाइड एंगल क्यामरा, ८ मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स र ५ मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामरा दिइएको छ । फोनको प्राइमरी क्यामरा सोनी IMX586 सेन्सरसहित आउँछ । फोनमा सेल्फीका लागि २० मेगापिक्सलको क्यामरा राखिएको छ ।
पावरफुल छ ब्याट्रिः
पावरका लागि फोनमा 4000mAh को ब्याट्रि दिइएको छ जसले क्विक चार्ज 4+ (18 वॉट) चार्जिङ सपोर्ट गर्छ । यो फोनमा ब्लूटूथ ५.०, वाइफाइ a/b/g/n/ac,जीपीएस, GLONASS ग्यालिलियो र वाइफाइ डायरेकटजस्ता कनेक्टिभिटी विशेषता छन् ।
हाइप्रोफाइल ट्वीटर ह्याकः बेलायतका १९ वर्षीय युवकसहित ३ जनामाथि आरोप
गूगल र फेसबुकले समाचार प्रयोग बापत भुक्तानी गर्नुपर्छ: अस्ट्रेलिया सरकार
नासाका अन्तरिक्ष यात्रीहरु सकुशल पृथ्वीमा अवतरण, ट्रम्पले दिए बधाई